Daraawiish iyo Sayid Maxamed | Voice Of Somalia
Category Archives: Daraawiish iyo Sayid Maxamed
XAAJI AADAN AFQALOOC,AUN-(1862-1986) “Gobannimo sun baa kaa xigtoo laysma siin karo’e Waa sarac ku baxa dhiig rag oo lagu sadqeeyaaye”
Posted on August 17, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Taqariikhdii iyo halgankii Xaaji Adan Axmed Afqallooc. Q. 1-aad (1862-1986)
Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyee, Xaaji Adan Axmed oo ku magac dheeraa Afqallooc. Wuxu ku dhashay miyiga magaalada Ceerigaabo, xilli ku beegan badhtamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad. Waxa loo badinayaa inuu dhashay 1862-kii inkastoo aanay sugnayn gu’gii uu dhashay, balse waxa lagu qiyaasayaa sannadkaa aan kor ku xusay. Wuxuuna dhintay 1986. Halkaa waxa kaaga muuqanaysa sannadaha uu ifka ku noolaa in ay inbadan kor u dhaaftay 100-ka sannadood. Sebenadaa tirada badan Xaajigu meel keliya muu deggenayn ama deegaan kooban kumuu noolayn, ee isagoo da’yar ayuu adduunka xulay. Lug ayuu dhulka badankiisa ku soo maray. Dalalka uu isagoo yar tegey ama dhallinyaranimadiis ii waxa ka mid ahaa: ( Yemen, Suudaan, Calatariya”Ereteria “, Itoobiya, Falastiin, Afqaanistaan, Indooniisiya iyo Jabuuti). Waxaad halkaa ka garan kartaa inuu ahaa waaya-arag, waana halka soomaalidu ka tidhaahdo “Nimaan dhul arag dhaayo mallaha”.
Xaaji Adan markii uu ku soo laabtay dalkiisii hooyo ee gobolada waqooyi ee Soomaaliya oo markaa ku jiray gacantii maamulkii Ingisriisa, wuxuu markiiba ka qayb qaatay guubaabadii iyo kicintii dadka. Suugaantiisu inkastoo aan la ururin oo aan meel laysugu keenin, waxa la tilmaamaa inuu suugaan aad iyo aad u mugweyn ka tiriyey, guubaabadii, kicintii, abaabulkii iyo guud ahaanba halgankii lagaga soo horjeestay maamulkii Ingiriiska oo markaa ka talinayey gobolada waqooyi ee Soomaaliya. Qormadan koowaad waxaan ku soo qaadan doonaa laba gabay. Gabayga hore waxa la yidhaahdaa “Gobanimo”. Wuxuu guubaabinayaa dadkii Somaaliyeed ee ku jiray maamulkii boqortooyada Islaanta Ingiriiska . Wuxuu lahaa gobonimada baryo laguma helo ee waa in dhiig daataa. Taasoo ku tusaysa geesinimadiisu halka ay gaarsiisnayd. Wuxuuna yidhi:
Samaan laguma doonee xornimo waa sange u fuule
Sallax dhagax leh meyd soobir ah iyo seedo waran gooya
Soofkoo la kala qaado iyo siigo kor u duusha
Haweenkoo gambada saydha iyo sebi agoomooba
Iyo libintu waxay saran tahay suluf colaadeede.
Gobannimo sun baa kaa xigtoo laysma siin karo’e
Waa sarac ku baxa dhiig rag oo lagu sadqeeyaaye.
GEERIDII SHEEKH BASHIIR,AUN,IYO XAAJI AADAN.
Sheekh Bashiir Sh Yusuf wuxu ahaa geesi, caan baxay oo si cad oo badheedh ah uga soo horjeestay maamulkii Ingiriiska. Sheekha waxa halhays u ahayd “Bisinka xoog ha lagu daro” oo uu hore u soo shirrabay.
Wuxuu lahaa dadyahaw ka kaca uu dalkiina iyo ciiddiina idinkaa iska leh oo maamulan kara, iskana erya saancaddaalaha. Sidaa darteed ayuu ciidan abaabulay, wuxuuna hadh cad dagaal ku soo qaaday magaalada Burco horraantii afartamaadkii.
Dagaalkaa waa lagaga xoog roonaaday Sheekh Bashiir, laakiin sidaa kumuu harin halgankiisii ee wuxuu u rogay dagaalka loo yaqaan “ku dhufoo ka dhaqaaq”,waa dagaalka maanta loo “Gorrila war” isagoo saldhig ka dhigtay meel aan ka durugsanayn magaalada Caynabo. Markii maamulkii Ingiriisku khaatiyaan, istaagay ee hadhsan waayey, jiifi waayey, ee geedkastaba looga sanqadhay ayuu go’aansaday inuu weerar ku qaado ciidanka Sheekh Bashiir. Sannadkii 1947kii ayaa la dilay Sheekh Bashiir. Maydkiisiina waxa la keenay magaalada Burco!.
Hadaba Xaaji Aadan Axmed oo aad uga tiiraanyooday geerida Sh Bashiir, kana xumaaday qaabkii loo dilay geesigii ummadda ayaa gabaygan ka tiriyey. Gabaygani wuxuu canaan dusha ka saarayaa dadka oo uu leeyahay idinka ayaa la idinka arkay, ee waxay ahayd inaad ka dagaallantaan. Qaybta koowaad waxaan ku soo afmeerayaa gabaygaa uu u tiriyey Sheekh Bashiir
DHAGEYSO:-Sayid Maxamed “Dawo kama heshaan faranji aad, daawo dhigataan,Dabinbuu idiin qoolayaa, waydin dagayaay,Dirhamkuu idiin qubahayaad, dib u go’aysaane”
Posted on August 4, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Posted on July 18, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Ingiriisku wuxuu isku dayey inuu Sayid Maxamed si walba ula dagaalamo. Dhinaca diinta, dhinaca qabyaalada, dhinaca siyaasadda iyo dhinac kasta oo suuragal ah wuxuu Ingiriisku ku dadaalay inuu Sayidka ka weeraro.
Isagoo isticmaalaya daacaayad iyo niman Soomaali ah oo gabya ayuu Ingiriis wuxuu Sayidka ku cambaareeyey inuu yahay hoggaamiye nacab ah, laayaan aan sokeeye iyo shisheeye u kala soocnayn iyo xaabqaad aan xataa maal agoomeed dhaafaynin. Dacaayadda noocaa ah oo dhabcan been iyo huuhaa iska ahayd wuxuu Ingiriisku ku faafin jiray gabayo ay tiriyaan rag dhawr ah oo halgankii Daraawiishta giniga Ingiriiska ka doortay. Raggaa waxaa ka mid ahaa Cali-dhuux Aadan Goroyo, Cali Jaamac Haabiil iyo kuwo kale.
Sayidka naftiisu noocyada dagaalka, af iyo adinba, maahir ayuu ku ahaa, daacayadda Ingiriiskana mid lid ku ah oo ka lugo badan ayuu ka horgayn jiray. Siduu Cabdiqaadir Xirsi Yamyamba u yidhi: “haddii ay ku moosaan, kartaa laysku muujaa” Sayidku karti ayuu isku muujiyey wuxuuna ku guulaystay inaan cadowgiisu qeexin shaqsiyadiisa ee uu isagu Soomaali isbaro isagoo gabay, wadaniyad, diin aqoon, cabsi Alle, hoggaamin siyaasadeed iyo mid dagaal iyo gacan furnaan aan caadi ahayn isku darsaday.
Gabaygan hoose wuxuu ka mid yahay gabayada uu Saydiku isku keen baray, kagana hortagay dacaayadii Ingiriiska ee xaqdaradda ahayd. Wuxuu yidhi:
Nin Illaah yaqaan oo sharciga, ku isticmaala
Ashahaado loo qoray nimaan, kala allaaweynin
Oo aan inkirahayn xaq waa, la oggolaadaaye
Nin salaadda awqaadda faral, u addimoonaaya
Oo dagada oofinahayoo, ugubka dhiibaaya
Oo aan bakhaylnimo abkiis, lagu ishaareynin
Nimaan diinta aafo u geleyn, aakhiruu sabanka
Oo aan amxaarada sidii, obo u yaacaynin
Oo gaalka ooradu ku taal, u askaraynnaynin
Nimaan abuurka Soomaliyeed, ka anfi taageynin
Oo aan ajuurada kufriga, ugu adeegeynin
Oo aan ardiga beesadeed, u ashtakooneynin
Nin jahaad ohoominahayoo, ubaxa loo saaray
Ingiriiska eygaa ninkii, ugu uneexaaya
Oo libin ajri leh soo heloo, or iyo geeraar leh
Nimanyahow aqoonxumadu, waa ardaalnimo e
Asaraar ma fiicnee runbaan, lagu arooraaye
Ninkii aynigaa lagu yaqaan, saw islaan ma aha?
Shir aguugay waayeel abyamay, tala ashaaddowdey
Irda jiqa albaabo isku xidhan, eel la bixin waayay
Xaajadaas afraha duubatee, loo olmami waayay
Nin aqoon leh aw iyo haddii, odaygu loo saaro
In kastoo ayaan iyo ayaan, lagu aloollaado
Ninkii maalintaa ka aarinsha, aaqil aw ma aha?
Uu uuda qaylada haddii, uubatadu yeedho
Sengootida ilwaadda leh haddii, agabta loo qaato
Awaaraha buska leh maalintuu, xamar abraaraayo
Maantii warmaha oofta iyo, adhaxda lays gooyo
maantuu aboodigu ku lalo, ubaxa loo daadshay
Maantii isaaya la dhaco, idil dagaalkeeda
Maantii fuluu naga ordoo, alabasoo rooro
Maantii raggaan loo ileyn, naga ugaadhoobo
Mantaa ninkii aarsan sow, aarka dhacay ma aha?
Nimaan edebdarrooneya xil, waa laga ajoodaaye
Aflagaadda aan jirin nimaan, kuula imaneynin
Oo kaa asluubanahayoo, kaa istixyoonaaya
Ab uu yahayba aadniga ninkii, same ekeynaaya
Abtirsiinya kii xigay nimaan, iriq u dheeraynin
Addoomaha Ilaahy nimaan, kala irdhaynaynin
Ninkii aamusoo shib ah haddii, eray xun loo geysto
Aan kula ekeekamin intuu, urur ku soo joojo
Aan xaaja awawgeed la gubay, ubucda jeexaynin
Anfaaciga adduunyada nimaan, ku anfariiraynin
Oo xeedhyo soor lagu akhtimay, eber ka yeelaynin
Oo sida ardaal wax u cunee, alam ka siineynin
Intuu aqalka baanjiyonimaan, aradda guulguullin
Aagaanta ciirtaa nimaan, aaska dhiganaynin
Oo aan qumbaha awdanoo, ilaxidhkow jiidan
Aaqibadii loo galo nimaan, kala illaaweynin
Oo kuu ixsaan fali intuu, edeg adduun joogo
Oo aan abaaldhaca aqoon sow, ikhyaar maaha?
Adhi badan lo’ iyo geel intii, mulug adduunyaada
Ugub dhalaya qaalmaha umulee, laga unnun gooyey
Eeraan fardood iyo gammaan, aradka duulaaya
Aqal weyn aroos bilic leh oo, ilaxidh loo yeelay
Inan quruxsan oo lagu ashbahay, uunsi iyo khayli
Oo qool asliya loo gashoo, jalamtu eedaami
Nasteexiyo wanaag iyo ninkii, ilindi kuu keenay
umuurtii aad leedahay ninkii, kuu abaynaaya
Adduunka iyo aakhiro ninkii, kuu aslaaxinaya
Ninkii maalintaad iillaan tahay, aana kugu qaataa
Oo aan abaarahakan dhacay, oodda kugu jiidin
Itaalxumana aan kaaga tegin, sow ikhwaan ma aha?
TAARIIKH KOOBAN:-April 12, 1899kii qunsulkii sarre ee Ingiriiska Gaashaanle Sare J. Hayes Dawson.
Posted on June 10, 2014 by Voice Of Somalia Standard
LA SOCO CAAWA GABAYGA OO MAQAL AH,INSHALLAH.
GABAY:-Maandeeqda teenaa ayaan maali kaligeene,madaxweynihii reerka noqo waa mugaagiiye
Posted on April 12, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Mowjadaha federaalka iyo maamul goboleedka
milaanuu shirkoodii kadhacay madashi gaaleede
marti hadalka maqas baa lahaa mooshin diineede
muslimkaa lakala miirayey miidda iyo uuse
makiinadaha qoraalkuu kajabay xarafka miinkaahe
musxafkoo la eedeeya iyo murug wixii muuqday
maqashaye maxaan kuu dulmari waa middoodiiye
marmarsiimo weeyaan madfac, miino suuq geyne
hayeeshee macmacaan iyo maal yaboohooda
ayaan looga maarmeyno waa boqol malaayiine
martabtiyo higgaadihi markii mooyac waagiisi
matalaadda halka loo mariyo mala awaal gaajo
macalinkii adigaa ahaa makri abuur kiiye
madaxweynihii reerka noqo waa muggaagiiye
Muuri iyo sideey leeyihiin maykal iyo Joonba
maqaar saarka guud baad unoqon moqor siyaaseede
miriqshaallo socod iyo adoo musaska raacaaya
maslaxada teennaa ogow maanac iyo yeelba
muxibana kusoo meerso waa lagama maarmaane
maalgashi ayagoow xaq lehe muuji hadalkooda
miiskana horuu saar markii aan ku magacowno
Makaankood waadigii tegoo muddo ku noolaaye
machadkana waadigaan maqnaan maalin ciideede
muhashiyo adigaa yaqaan meeri dalabkeede
maandhoow ayaan layga marin maanta dhinacooda
mandhiqadna maatada uqabo magaca noo dhuuji
Oo milifta toodaa utaag lagama maarmeyne
seddex midabna maandhow uyeel oo mar ii jeedi
maandeeqda teenaa haddaan maali kaligeene
Maxbuub iyo Mahiigaa nayiri waaba mudateene
marqaatina deriskaa ahaa muruq nasiiyeene
millateriga reerkaa haddeer loo mashxaradaaye
mooryaanta reeraha kaliyo maalqabeenkooda
midna lama midoobeyno waa madax adkaadeene
macmil derisna waa leenihiyo mugdi adeegiiye
waana nala mataaneynayaa maanta dabadeede
muxibada umuujiya intii mooradaan oodday
ninba waa markiisee haddaan megen saneynaaye
Muqdishaba waxaa maamulaa maar Yugaandheyse
masaakiinti Xamar bay qafaal milicda taagaane
maxkamad la,aan bay sikale uga macaashaane
ayagoo macluulshay sidii mowto kaal layne
mashruuc weeye magac dowladeed lagu masruufaaye
milifteenna nootaag marabo maana feestada e
Moi land iyo Melis state kalama maarmaane
(waa dardaarankii oday maqas uusiiyey madaxwenaha)
lasoco qeybta labaad ee dardaaranka inshaa allaah.
TAXANAHA TAARIIKHDA SOOMAALIYEED-“Maalin Murugo 19.12.1919 Guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed” – W/Q. Abdulkadir Yusuf Ali
Posted on April 6, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Sagaal iyo tobankii Bishii December sanadkii 1919kii waxaa magaalada Taleex laga gaystay duqayn aan loo meel dayin iyo xasuuq gumaysi, kaasi oo ay ka gaysteen Ciidamadii booqortooyada Ingiriiska (ROYAL AIR FORCE). waa maalin u suntan dhamaan ummada Soomaaliyeed in la xasuusnaado oo la xusana inaga mudan.
Inkastoo aan qoraal lagusoo koobi karin halaagii iyo hoogii maalinkaa meesha ka dhacay bal aan wax yar ka taabano.
Diyaaradu waxay duqaysay Daraawiish December 19, 1919, waxayna noqotay halgankii waddaniga ahaa ee qaaradda Africa ugu horeeyey oo diyaarad lagula dagaalamo. si ay taariikhdu iyadu isu fasisho, waxaan soo qaadanaynaa gabayadii caanka ahaa qaybo ka mida. Sayid Maxamed Cabdulle Xassan (Raximahu laah) isagoo ka waramaya duqayntii maalintaasi iyo say wax u dhaceen Wuxuu yidhi,
– Coomaade duulayey Cadan ka keenee neeh
– Cirkii iyo dhulkii baa isqabsaday cararaqdoodiiyeh
– Adiguba caqlaad leedayee carar maxaa dhaamaa.
Goor subaxa ayaa xarumihii Darawiish losoo diray dayuuradaha dagaalka ee Ingiriiska kuwaasi oo tiradooda lagu sheegay inay haayeen lix dayuuradood oo nooca dagaalka ah, Kuwaasi oo isku mar dabka saaray dhamaanba goobihii ay ku tuhunsanaayeen Daraawiish taasi oo ay ka dhalatay in halkaasi ay ku naf wayaan dad tiro badan xoolo geel, adhi, iyo lo’o ba leh iyo waliba magaaladii oo dhulka lala simay gabi ahaanba iyo bara kac. maalintaasi Daraawiish waxay ku guulaysteen inay dhulka soo dhigaan mid ka mida lixdii diyaaradood ee duqaynta gaysanayey. dayuuradahaan waxaa kaliya oo loo dirijirey goobaha boqortooyada Ingiriisku ay u aragto inay khatar wayni kagasoo fool leedahay. Sida aan la socono Ciidamadii isbaahaysiga ee Ingiriiska xabashida iyo Taliyaaniga oo ay Daraawiish gooba badan fooda isku dareen hoog iyo guul daro ayay kala kulmeen Ingiriis iyo garabkiis, goobaha aadka loo xasuusto waxaa ka mida dagaalkii Ruuga ama Dul-madoobe waa dagaalkii daraawiishtu ku dishay Richard Corfield waxaa wax ka qoray Taariikhyahan Canadiana oo lagu magacaabo Ray Beachey, Buugiisa ,The Warior Mullah: The Horn Africane, London 1990. Wuxuuna dagaalkaas ku tilmaamay mid xeelad adag ay Daraawishtu ku dagaalantay, ciidanka Ingiriiska wuxuu ahaa 110 oo Burco ka yimid, 35 goobtii baa lagu dilay ay ka mid ahaayeen (Corfield, Dunn, Ducaale), 17 dhaawac xun baa gaaray, 24 waa fakadeen lamana helin raq iyo ruux, 10 goobtii ayey ka carareen.
Ismaaciil Mire (Raximahu laah) wuxuu hogaaminayey ciidankii dagaalka ku qaaday ciidamadii Ingiriiska ee uu hogaaminayey Richard Corfield. Dagaalkaasi wuxuu ka dhacay goobta loo yaqaan Ruuga ama Buurta Dulmadoobe, 9kii Agoosto, 1913kii.
Gabaygu waa warbixin ka warramaya sidii dagaalka loo qaaday ama loo abaabulay, sidii loo duulay, weerarkii iyo sidii xoolihii looga soo dhacay qoladii lagu duulay, dilkii Koofil, iyo ugu dambaystii soo noqoshadoodii iyo saamigii geela.
Ismaaciil Mire, wuxuu ugu warramayey Sayid Mahammad iyo Qusuusidii Daraawiishtii kadib markii ay xoolihii keeneen Xaruntii Daraawiishta ee Taleex iyo gacan laga soo jaray Corfield. Ismail Mire Cilmi gabaygiisii waxaa ka mid ahaa:
– Annagoo Taleex naal jahaad taladi soo qaadnay,
– Toddobaatan boqol oo Darwiish togatay neef doorka,
– Sayidkeennu tii uu na yiri Torog ku heensaynnay.
– Wareegada waxay uga tawalin yaan wax kaa tegine,
– Sibraar caana geel loo tabcaday Talax ku sii maallay,
– Misna tawlka qaalmaha niniyo tulud u soo saarray.
– Ilaahay ha tabantaabiyee noogu tacab khayrka,
– Shakadaha intuu noo tamilay tiisa nagu waani,
– Tiirkii Rasuulkiyo sharciga toog ku wada fuullay.
– Galabtaa taxaabiyo kadlaba toobiyaha qaadnay,
– Habeenkii fardaha waw turnaye taag ku sii mirannay,
– Tun biciida lagu qoofalyoo xamashka loo taabay.
– Goortii ay Talaaduhu dhaceen talalayoo reemay,
– Tixda gabay kolkii aan akhriyey toosi niman jiifay,
– Tiraabkaygu meeshu ka baxay la isku soo tuumi.
Markaa ka ddibna Sayid Mohamed baa gabaygan soo socda oo uu koofil ku halqabsaday mariyey, oo wuxuu yidhi:
– Adaa Koofilow jiitayaan, dunida joogeynee
– Adigaa jidkii la gugu wadi, jimicla’aaneede
– Jahannamo la geeyow haddaad, aakhirow jihato
– Nimankii jannow kacay war, bay jirin inshaalleeye
– Jameecooyinkii iyo haddaad, jawi aragto
– Sida Eebahey kuu jirabay, Mari jawaabteeda
– Daraawiish jikaar naga ma deyn, tan iyo jeerkii dheh
– Ingiriis jabyoo waxaa ku dhacay, jac iyo baaruud dheh
– Waxay noo janjuunteenba waa, jibashadiinnii dheh
– Jigta weerar bay goor barqaa, nagu jiteeyeen dheh
– Anigana Jikrey ila heleen, shalay jihaadkii dheh
– Jeeniga hortiisey rasaas, igaga joojeen dheh
Dagaalkii diyaaradda ee Taleex Waxaa gumaysigii isku dayey in uu qabto Sayid Maxamed Cabdulle Xassan, waxaase Sayidkii u talaabay Iimey iyo Ethiopia isagoo sii maray Baydhaba, wuxuuna markaas tiriyey tix uu ummadda Soomaaliyeed kula dar daarmayo, ayna ka mid ahayd:
– Dadow maqal dabuubtaan ku idhi ama dan haw yeelan
– Ama dhaha darooryiba jiryaye doxorku yeelkiiseh
– Nin rageey dardaaran way u tahaye doqoni waa moogeh
– Marka horre dabkuu idinka dhigi dumar sidiisiiyeh
– Marka xigana daabaqada yuu idin dareensiine
– Marka xiga dalkuu idinku odhan duunya dhaafsada eh
– Marka xigaa dushuu idinka rari sida dameeraha eh
– Mar haddaan dushii Adari iyo Iimeey dacal dhaafay
– Maxaad igaga digataan berruu siin lasoo degiyeh.
Waxaa halkaas ku hakaday halgankii waddaniga ahaa ee Daraawiish, Soomaalidiina waxay gacanta u gashay Ingiriis, Talyaani iyo Xabashi oo heshiis ku ahaa la dagaalanka Daraawiishta. Markaasaa Ingiriiskii gacanta ku dhigay Suldaan Mohamoud Ali Shire, loona masaafuriyey Seychelles 3’dii Bishii May 1920, iyada oo la sii mariyey mombay, India, iyadoo oo la sii saaray markab.
Sidaas si leeg Talyaani wuxuu soo gaadhay Gobalka Bari, wuxuu kale oo 1923 ka bilaabay Afgoye iyo Janaale in uu dadka beeraha ku falo, webigana kaga talaabo, waxaana ka mid ahaa goobtii caanka noqotay ee Kelli Asaylle, ee ragii ku dhintay dumarkoodii asay u qaadeen, halkaas oo magucu ka yimid.
Ugu dambayntii Xukunkii Daraawiishtu wuxuu gaadhay xagga Bari Ilaa Ayl, Waqooye Badda Cas, Koonfur ilaa Wardheer iyo Galbeed ilaa Kiridh.
W/Q Abdulkadir Yusuf Ali.
DHAGEYSO-Wasiir Goodax “Dowladdu ma madax banaana dalka waxaa Maamula AMISOM,beesha Caalamka ayaa diidan..”
Posted on March 29, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Wasiirka arrimaha gudaha Dowladda Federaalka ayaa shaaciyay in ciidankooda iyo saraakiishooda aysan aheyn kuwa madax banaan oo awooda in ay maamulaan deegaanada ay gaaraan.
C.llaahi Barre Goodax oo ka qeybgelayay barnaamijka falanqeynta Jumcaha BBC-da ayaa qiray in wax madaxbanaani ah aysan heysan Dowlada Federaalka min madaxweyne illaa iyo askari dable ah islamarkaana AMISOM ay hubka iyo shidaalka gacanta ku heyso.
“Shacabka soomaaliyeed waxba kama qarninayno annagu uma madaxbanaani howlgalada AMISOM ayaa leh sababtoo ah beesha caalamka ma ogola in ay dowladda siiso dhaqaalo iyo saad ciidan”ayuu yiri Goodax.
DHAGEYSO-Gabaygii Gudban Gaala Leged iyo Sayid Maxamed.
Posted on March 16, 2014 by Voice Of Somalia Standard
DHAGEYSO-Gabay ku socda Xabashida Duulaanka ah”WARMOOG”
Posted on February 9, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Wuxuu gabaygan shacabka xasuusinayaa dhibaatooyinkii Guracnaa Itoobiya ka gaystay Muqdisho oo ah Caasimada Soomaaliyeed isagoo wax lala yaabo ku tilmaamay dadka haatan ku dhawaaqaya Itoobiya inaysan ahayn tii hore.
“Waxa weega dhacayaa ma jiro wariye sheegaahe
Waa taa Amxaar iyo Tigree la walaalowye”
DHAGEYSO:-Nabadoono Falanqeeyay Qorshaha ka danbeeya Shaatiga Amisom ee ay qaadatay Dowladda Itoobiya.
Nabadoon Warsame oo Muqdisho jooga iyo Nabadoon Cabdikariin Muuse Casir ayaa waxay si wada jir ah usheegay in Itoobiya aysan isbadaleyn shaati kasta hadii loo galiyo islamarkaana ay Soomaaliya utahay Cadow soo Jireen ah.
Nabadoon Warsame ayaa sheegay Shacabka Soomaaliyeed kuwooda damiirka usaaxiibka ah inay diyaar uyihiin sidii ay isaga dhicin lahaayeen Ciidanka Itoobiya.
Ciidamo kabadan Afar kun oo ka socda Dowladda Itoobiya ayaa shaatiga Amisom ku qaatay Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobalka Bay.
Posted on February 6, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Soomaali-Sarraynta QABYAALADDA & Saamayn daridda ISLAAMKA .
Dadka Soomaaliyeed waa bulsho ku dhaqan dunnida Qabyaaladda , waa dad xilligaan casriga ah ee dawladnimaddu horrumariso dadkeedda iyagu ( Soomaalidu) kaga tilmaaman dadki ku fashilmay dawladnimo yeelashadda .
Kolka qiimaynta Bini’aadamka dunnida dacaleedda ku kala dhaqan la sameeyo qof kasta oo Maankiisa iswayddiintu ku xoogan tahay oo ka wayddiin-celinta ku cabira qimayn isbarbardhigu sal u yahay lehna dood difaaceed murtiyeysan kolka la wayddiiyo Sabbo (Qowmiuaddo) ama dad dalleedyadda kala xayndaabtay dhulalka ee bini’aadameedka dunnida ku dhaqan yaa ugu tayo hooseeya ? waa Hubaal in uu judhaba isaga oo aan in badan maankiisa ku howlin ka wayddiin-celinta wayddiintaas uu la soo boodaayo SOOMAALI .
Sabbabta ka dambaysa in aan Dunnida ugu liidnaano ayay tahay mid ay innoo leedahay QABYAALAD aaminka inna gayaysiisay heerka ugu hooseeya ee aan dunnida ka joogno .
Qormaddeennaan ayaynnu iskula waddaagaynnaa Sarraynta Qabyaaladda & Saamayn darrida Islaamka e Soomaaliya .
Waxaa isbarbardhigaynnaa halka hoosaysa ee Soomaalida saamaynta Islaamku ka taagan tahay , iyo heerka sarreeya ee Qabyaaladdu qofka Soomaaliyeed tahay sabbabta ka dambaysa fal samayskiisa badankiis .
Sarraynta QABYAALADDA .
Qabyaaladdu waa aaminaadda u saraysa ee qofka Soomaaliyeed (sida Badanku yahay )u necbaado , u jeclaado , u dillo , u bixiyo , u farxo unna murrugoodo .
Dadka Soomaaliyeed dhexdooda ma jirto Aaminaad ka saraysa Qabyaalad , Dagaalka waxaa sababa dhulka Soomaalida QABYAALAD , Isa soo dhowaysashadda iyo xulufaysigana waxaa sal u ah Qabyaalad .
Siyaasadda oo macne ahaan ah danta guud ee bulsho ka xalinta dhibabka dabeecadda ku sidkan , Soomaalida waxaa siyaasaddooda qaribaadda samaysaa ay tahay SIYAASADDI QABYAALADDAYSNAYD , kolkaas waxaa meesha ka baxday Siyaasad oo ahayd danta Bulshadda oo wadda dhan , waxaana dhigeeda ah Siyaasad QABYAALADDAYSAN oo ah mid qofka siyaasiga ahi u koox odayeed kiilo hantidda Bulshadda ka dhaxaysa inta ku koox odayeed in ay yihiin uu aaminsan yahay ee ay ku wadda jirraan Xayndaabka Is-beelaysashadda (Tollow).
Dhanka xeerka iyo sharciga bulsho qabyaaladdeedka Soomaaliyeed waxaa nidaam dawladdeedyaddooda u xeer ah xeerer caqligu dajiyo , xeerkuna waxa uu qabtaa hadba kan QABYAALAD awooddaysigiisu hooseeyo , halka kan Siyaasi qabyaaladdeedka kolkaas awoodda haystaa kan ku koox odayeedka ah aannu qaban .
Waa Xeerka Caqligu dajiyey ee ay haystaan Bulshadda QABYAALADDU waxa uu qabtaa midka mudan in uu Xeerku qabto ee ah kan aan lahayn matale Siyaasaddeed hab qabyaaladdeed ugu ah wakiil siyaasaddeed ama illaaliye Qabyaaladdeed (Isim) iyo kooxda xarriman ee QABYAALADDU dhumisay xaquuqahooddi qofnimo ee Alle siiyey oo iyaga matale siyaasaddeed iyo Illaaliye koox odayeedba aysan waxba u tarin ee ay yihiin dad u QABYAALADDU u dhigtay dulmanayaal.
Kolkaas qabyaaladdu waa fahan nololeedka la fiicnaysiiyo dadka Soomaalida dhexdooda ee qofku u arko in aannu la’aanteed noolaan karin , loona aqoonsan yahay in QABYAALADDU tahay mid qofkeedda u ah tu barraaraysa , halkaan waxaan arkaynnaa in QABYAALADDu qofkeedda jaanjaamiso oo ka dhigto ku dhimmirla la ‘.
Tus. Mid dhiban oo Saboolnimo & amni darro ku dhex nool ayaa ku leh waxaan ahay mid mudan .
Soomaali waxay u kala dhigan yihiin Koox odayeedyo colaadi dhexdoodda taal , is-colaadinta Soomaalida ayaa ah mid ku sidkan Sooyaalkooda , Dhulku waa u kala soohdimaysan yahay , koox odayeed kastina waxa uu aanno iyo godob ka tirsaddaa kuwa kale , Koox odayeednimadduna ma ahan mid heer joogsi leh , oo waa in dadku isku urursaddaan Oday dhintay midnimo ku astaysan , taasu waxay keentay in is-necbaanshuhu gaaro heerka ah labadda wadda dhalatay in midba kan kale necbaado .
Dhul kala xaydaabashaddu waa mid salka ku haysa Soomaalida oo reer guuraa xoolla dhaqo ka soo jeedda ka hor xilligaan Reer Magaaloowga bal ay wali ku tiirsan tahay nolosha Soomaalidu xoollaha ase la oran karro hadda Magaalo ku noolaanshaha ayay nolosha Soomaalidu u badatay …ayaa leh tixraaca Qabyaaladda dhulka kala siinaysa dadka Soomaaliyeed ee kala ah Tollalka tirro beelka ah ee mid kasti dhankiisa uu colka ulla yahay kuwo kale oo badan .
Guud ahaan dhibka haysta dadka Soomaaliyeed ayay qabyaaladdu sal u tahay , Soomaaliduna waa Bulshaddi ay qabyaaladdu u ahayd sarraynta fahanka nolosha ee kala saara xummaha iyo sammaha .
Caribku waa qofkaas waxaa dhalay oday hebel oo isagu caruur yar ayuu dhalay waana kan hooseeya halka walaalkiis uu dhalay caruur badan oo yahay kan sarreeya .
Saamayn daridda ISLAAMKA .
Fahanka nolosha ee kala saara xummaha iyo sammaha ee samaawiga lagu eego iyo siyaasad ku jaangooynta ugu fakarka samaawiga ayay Soomaalidu ka maran tahay .
Diinta islaamka oo ah diinta dadka Soomaaliyeed ayaan samaayn dhaqankooda , waxaa loogu yeeraa Soomaalida bulsho mugdi ku nool oo iftiinka diinta islaamka garab marsan hadana ah dad Muslimiin ah oo lagu mitaalo AFKA MUSLIM .
Waa rumeeyayaal aan ku dhaqmin Diinta islaamka , mana soo gasho dhaqankooda Islaamnimaddu inyar mooyaane dadka Soomaaliyeed .
Horay in haatanba waa mid usoo dhigan Soomaalida in Diinta islaamku u ahaato mid ay sheegtaan aysanna dhaqan-galin faraaladda Alle Kor ahaaye ugu yeeraayo dadkiisa rumeeyey diintiisa .
Badalki diinta waxaa Soomaalida ugu jirta QABYAALADDA oo ah sababta samaysa falka qofka Soomaaliyeed .
Isbarbardhiga QABYAALADDA Iyo DIINTA
DIINTA.Diinta Islaamku waxay qabtaa in aan gabadha Muslimadda ah aannu guursan karin nin aan haysan diinta Islaamka .
QABYAALADDA.Qabyaaladda Soomaalidu waxay qabtaa in Gabadha gunta ah aannu guursan karin wiil gob ah sidoo kale wiilka gobta ahi aannu guursan karin Gabar gur ah .
Haddii ay labadda middi dhacayso waxaa aabbaha Soomaaliyeed ee Qabyaaladdeed mid sahlan u arkaa in Gabadhiisu guursato nin aan ku diin ahayn halka uu u arko mid aad uga xun taas hore in Gabadhiisu guursato nin gun ah .
DIINTA. Diinta Islaamku waxay qabtaa in Alle oo kali ah leeyahay xarimaadda iyo xalaalaynta .
QABYAALAD. Qabyaaladdu waxay qabtaa in dadka qayb ay isguursiga iyo sinnaanta ka xarimi karaan kuwa kale .
Tannu waxay muujinaysaa in QABYAALADDU gaarsiinayso qofkeeda in uu hor istaago xaquuq iyo xaq Alle kor ahaaye siiyey qof diintiisa haysta , waxay faraysaa QABYAALADDU dadkeeda in ay qaataan doorka ka reebidda , waa mid lid ku ah diinta Islaamka in qof uu qof kale duudsiyo iyaga oo haddana wadda ah Muslimiin in mid mid kale gayaysiiyo looga guuriyaan aan laga guursan .
DIINTA. Hadii magaalo ka mid ah dhulka Soomaalida qof ku aflagaadeeyo Allaah (Xummo ka dhan ahaaye) iyo suubanaheenna Muxammed (Naxariis iyo nabadgalyo korkiisa ha ahaatee) waxaa dhacaysa in aan qofna waxba oran oo la yiraah ma adigaa diinta ka xiga .
QABYAALADDA- Hadii aad ka dhex tiraahdo magaalo Soomaaliyeed Qabyaaladda oo ah odayaal dhintay oo la aaminaa waa fahan nololeed qaldan ee hala dooriyo waxaad halis u tahay in ay waxyeelo ku soo gaarto .
Midaanu waxay inna tusinaysaa heerka durugsan ee Soomaalida ka gaarsiisan tahay Qabyaaladda oo ah aaminaadooda u saraysa , halka diinta Islaamkuna tahay mid aan samayn lahayn oo labadda (Diinta & Qabyaaladda) loo dilaayo qofka QABYAALADDA hadii uu ka dhan ahaado , halka Alle (K.A) iyo Nabiga (NNKH) qofka ku gafa ay difaacayso Tolloowgu oo la leeyahay hade waa Reer Hebel nin ahe ma adigaa ka xiga diinta .
Ka Faallood Kobsan.
Waxaynnu kor ku soo maray in ay Qabyaaladdu ka awood badan tahay Soomaalida dhexdooda diinta Islaamka ,ma jirto sabab uu qofka Soomaaliyeed ee QABYAALADDAYSANI u sameeyo fal oo ka durugsan tan qabyaaladda .
Sida Soomaalidu tahay ee ah bulsho fashishay , bini’aadamkana ka duwan ayay leedahay Qabyaaladda gaartay in ay diinta ka sarra marto .
Waa hubaal in QABYAALADDA salkeedu sidan yahay , qof qabyaaladdeedkuna waa mid Nabi Muxammed NNKH ku tilmaamay doorshaan mid Alle KA ugu mitaal dhigan agtiisa .
Waa dhab in QABYAALADDAYSANUHU doorshaan yahay sida suubanaheennu sheegay , waxaana sawirkaas doorshaannimadda ka arkayaa qofka Soomaaliyeed ee u neceb QABYAALADDA darteed qof kale , hebel hebel baa dhalay qofka u nacay waa qof doorshaan ah .
Kolkaas Dhulka Soomaalidu waa carrigi doorshaanka , Soomaaliduna waa doorshaanaddi dunnida ee samayskoodu ahaa Bini’aadamka .
Soomaalidu dhexdooda kolka waxyeeladda ay isku hayaan laga soo tago dunnida kale dadka ku dhaqan ayay ku yihiin dhibaato , qofka Soomaaliyeed waa qof qatar badan oo waxyeelaynta dadka kale ay u sahlan tahay .
Qabyaaladdaan Soomaalida silicsanaanta badday ayaa ah mid soo taal illaa inta Sooyaalkooda la hayo , ka bixisiinta iyo badalidda jiilka soo aadan oo ay u tabinayaan doorshaanadda haatanu doorshaanimada ayaa ah mid waajib ku ah qof kasta oo Soomaaliyeed ee ka sarriganaaya in uu doorshaan Alle KA agtiisa ka ahaado , qalbigiisana ay gubayso in tarraarku caynkaan u ahaan Soomaalida oo kuwa soo aadan laga bad qabto gaarsiinta Qabyaaladda .
Qabyaaladdu waa aaminaad qatar badan oo halis ku ah bini’aadamka , dadka qaadataana waa sida Soomaalida kuwo noqonaaya .
Tusaallaha xummaha qabyaaladda qofki doonaaya waxa uu ka arkayaa Soomaalida , kolkaas Soomaalidu waa Tusaallihi xummaa ee goortaan dunnida korkeedda .
Ugu dambayn iswayddii sababta aad qof dhintay u aaminsan tahay , ee aad ugu dhigtay mid aad ku kala eegto xummo iyo sammo .
Qorre: Idiris A. Dooxa-joog
Ciidanka gaarka loo leeyahay “Alpha Group” oo Tarsan ka qaaday Teleefanada Xabsi Gurina ka Dhigay.
Posted on January 18, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Ninkii bari ugu awooda badnaa inta dowlada Federaalka ka xukunto Muqdisho ayaa xaalkiiso yahay mid liita ka dib markii la dhigay wasiir ku xigeen,taasoo macnaheedo yahay iska soo diyaari kursiga Gobolka Banaadir.
Tarsan ayaa soo diray Video oo ku diidayo kursiga la siiyay,wuxuuna qiil ka dhigtay inaan lagu wargelin howshaas loo diray.
Waxaana arinkaas dhibsaday kuwa fadhiya Villa Somnalia,waxayna u qaateen in Tarsan fashil wado,waxayna war galiyeen kuwa kor ka xukuma oo Xalane degan waxayna soo direen ciidanka loo yaqaan ALPHA GROUP Muqdishana loo yaqaan Gashaan, oo ah ciidan u badan Koonfur Afrikaan calooshooda ku shaqeeya waana ilaalada gaarka ah ee Xarunta Xalane iyo Jaziira,kuwaas oo Tarsan ka qaaaday telefaoonada kuna amray inow gurigiisa ka bixin karin ilaa amar danbe.
Wixii a soo kordha waan soo wadanaa Insha allah.
DHAGEYSO-GABAY:-Adkaystaay Aduunyado Dhimane Aakhira Darane.
Posted on January 13, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Gabay qiiro leh oo laga hadlayo dad islaamka ah gaar Soomaalida xabsiyada ku jirta uga jirta waxay aaminsan yihiin diintooda qiimaha badan.
Gabayga ayaa la hadlaya dadka Dhiban oo dhan,wxuuna leeyahay samra oo dulqaata aduunyado waa dhimantahay ee aakhira ayaa daran.
Qoraagii Taariikhyahanka ahaa Aw Jaamac Cumar Ciise oo Jabuuti ku Geeriyooday.
Posted on January 6, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Waxaa Maantay Jabuuti ku geeriyooday, Qoraagii Taariikhyahanka ahaa Aw Jaamac Cumar Ciise Ilaahay ha u naxariisto, wuxuu Aruuriyey Taariikhda Soomaalida gaar ahaan Halgankii Daraawiish iyo Suugaantii Sheekh Sayid Maxamed Cabdulle Xassan,AUN.
Bahda Tixraac ee Afka Soomaalida iyo Dhaqanka xilweyn iska saaray ayaa dhinaca Aakhiro u sii socda xilli Dalka Soomaaliya ay qabsadeen gumaystayaal, dhawaan ayey ahayd, markii Rag Bahda Tixraac kamida ay geeriyoodeen sida C/qaadir Xirsi Yamyam.
Dadkii Soomaalinimadu ku jirtay ee Cadowgooda yaqaannay, waxay u socdeeleen Aakhiro, laakiin waxay Soomaalida oga tageen, Taariikh iyo Suugaan ku qoran Luuqadda Hooyo ee Afka Soomaaligaa.
Bal aan dhagaysano oo daawanno, Aw Jaamac Cumar Ciise oo Gabaygii Sayidka ee Adigaa Kuufiyow Jiitay, ku luuqaynaya.